Soosaarayaasha Slide Taxanaha Soosaarayaasha & Alaab-qeybiyeyaasha - Factory Taxanaha Slide Jiitaa Shiinaha
Fidinta Buuxda ee Isukeenista Dhaqdhaqaaqa Iskuxirida Jilicsan ee Runner oo leh 3D Front Brackets
Kordhinta buuxda ee iskuxidhka iskudhafka jilicsan ee qarsoon ee qaan-qaadaha leh 3D-yada hore waxay badanaa u isticmaalaan jikada & armaajooyinka musqusha. Noocaan ah dhalada khaanadaha hoose waxay isticmaalaan boolal la hagaajin karo iyo fiilooyin balaastig ah oo lagu hagaajiyo khaanadaha alwaaxa. Lahaanshaha mashiinka TAIWAI ee saxda ah, oo leh fikrad qaabeyn heer sare ah kooxdeena farsamada ee aadka uquruxsan waxay si taxaddar leh u soosaaraan qalab heer sare ah oo heer sare ah oo qalabka GERISS ah kaas oo ah xulashada ugu fiican ee shirkadaha guryaha adduunka.
Qaab No.: EUR33BS
Kordhinta Keli ah ee Jidhka ah ee Udhow Hoos u Dhaawaca Sawirro leh Wareegyo la isku hagaajin karo iyo fiilooyin
Hordhac:Kordhinta Keli ah ee Jilicsan ee Udhow Hoos U Dhawaada Iswiidhishyo leh Boolal lagu hagaajin karo iyo fiilooyin badanaa loo isticmaalo jikada & armaajooyinka musqusha Noocaan ah dhalada khaanadaha hoose waxay isticmaalaan boolal la hagaajin karo iyo fiilooyin balaastig ah oo lagu hagaajiyo khaanadaha alwaaxa. Lahaanshaha mashiinka TAIWAI ee saxda ah, oo leh fikrad qaabeyn heer sare ah kooxdeena farsamada ee aadka uquruxsan waxay si taxaddar leh u soosaaraan qalab heer sare ah oo heer sare ah oo qalabka GERISS ah kaas oo ah xulashada ugu fiican ee shirkadaha guryaha adduunka.
Qaab No.: EUR23A
Kordhinta Keli ah Jilibka u dhaw ee Hoos udhaxeeya Iskuxiraha Iskuxiraha Hore
Hordhac:Kordhinta Keli ah ee Jilicsan ee Dhaw Hoos u Dhageyso Qalabka Iskuxiraha Hore waxay badanaa u isticmaalaan jikada & qolka musqusha. Noocaan ah dhalada khaanadaha hoose waxay isticmaalaan boolal la hagaajin karo iyo fiilooyin balaastig ah oo lagu hagaajiyo khaanadaha alwaaxa. Lahaanshaha mashiinka TAIWAI ee saxda ah, oo leh fikrad qaabeyn heer sare ah kooxdeena farsamada ee aadka uquruxsan waxay si taxaddar leh u soosaaraan qalab heer sare ah oo heer sare ah oo qalabka GERISS ah kaas oo ah xulashada ugu fiican ee shirkadaha guryaha adduunka.
Qaab No.: EUR23B
Kordhin Kali ah Riix-fur Hoos-u-dhigista Khaanadda Hoos oo leh Boolal lagu hagaajin karo
Hordhac: Kordhinta Kali ah ee riix-fur Hoos-u-dhigista Khaanadda Hoos-u-dhac ah oo leh Wareegyo la isku-hagaajin karo ayaa badanaa loo isticmaalaa jikooyinka & musqusha. Noocaan ah dhalada khaanadaha hoose waxay isticmaalaan boolal la hagaajin karo iyo fiilooyin balaastig ah oo lagu hagaajiyo khaanadaha alwaaxa. Lahaanshaha mashiinka TAIWAI ee saxda ah, oo leh fikrad qaabeyn heer sare ah kooxdeena farsamada ee aadka uquruxsan waxay si taxaddar leh u soosaaraan qalab heer sare ah oo heer sare ah oo qalabka GERISS ah kaas oo ah xulashada ugu fiican ee shirkadaha guryaha adduunka.
Qaab No.: EUR23C
Kordhin Dheeraad ah oo Jid-Dhaw ah oo Hoos-u-jiidan ah oo looxidho Golaha Wasiirada - 16mm sabuuradda
Hordhac:Kordhinta buuxda ee khafiifka-dhow ee hoose khaanadda khaanadaha aan xayndaabka lahayn - 16mm loox khafiif ah ayaa badanaa loo isticmaalaa jikooyinka & qolka musqusha. Noocaan ah dhalada khaanadaha hoose waxay isticmaalaan boolal la hagaajin karo iyo fiilooyin balaastig ah oo lagu hagaajiyo khaanadaha alwaaxa. Lahaanshaha mashiinka TAIWAI ee saxda ah, oo leh fikrad qaabeyn heer sare ah kooxdeena farsamada ee aadka uquruxsan waxay si taxaddar leh u soosaaraan qalab heer sare ah oo heer sare ah oo qalabka GERISS ah kaas oo ah xulashada ugu fiican ee shirkadaha guryaha adduunka.
Qaab No.: EUR33A16
Jilicsan dhow qarsoon khaanadaha orodyahano kordhin dheeraad ah - 18mm dhinaca guddiga khaanadda
Hordhac:Jilicsan jilicsan oo qarsoodi ah oo qarsoon oo orodyahannada dhaadheer ah oo dheeri ah - 18mm guddiga dhinaca khaanadda badanaa waxay u isticmaalaan jikooyinka & qolka musqusha. Noocaan ah dhalada khaanadaha hoose waxay isticmaalaan boolal la hagaajin karo iyo fiilooyin balaastig ah oo lagu hagaajiyo khaanadaha alwaaxa. Lahaanshaha mashiinka TAIWAI ee saxda ah, oo leh fikrad qaabeyn heer sare ah kooxdeena farsamada ee aadka uquruxsan waxay si taxaddar leh u soosaaraan qalab heer sare ah oo heer sare ah oo qalabka GERISS ah kaas oo ah xulashada ugu fiican ee shirkadaha guryaha adduunka.
Qaab No.: EUR33A18
Aamusnaan jilicsan oo khafiif ah oo qarsoon oo hoose ayaa si buuxda loogu dhejiyaa oo leh cutubyada hore
Hordhac:Aamusnaan jilicsan oo khafiif ah oo qarsoon oo hoose ayaa si buuxda loogu dhejiyaa agabyada hore ee bilaashka ah badanaa loo isticmaalo jikada & qolka musqusha. Noocaan ah dhalada khaanadaha hoose waxay isticmaalaan boolal la hagaajin karo iyo fiilooyin balaastig ah oo lagu hagaajiyo khaanadaha alwaaxa. Lahaanshaha mashiinka TAIWAI ee saxda ah, oo leh fikrad qaabeyn heer sare ah kooxdeena farsamada ee aadka uquruxsan waxay si taxaddar leh u soosaaraan qalab heer sare ah oo heer sare ah oo qalabka GERISS ah kaas oo ah xulashada ugu fiican ee shirkadaha guryaha adduunka.
Qaab No.: EUR33B16
Kordhinta buuxda ee hoose buurta dhalada jilicsan ee dhow oo leh qalab quful leh
Hordhac:Kordhinta buuxda ee hoose ee dhalada jilicsan ee khafiifka ah oo leh qalab quful leh ayaa badanaa loo isticmaalaa jikada & qolka musqusha. Noocaan ah dhalada khaanadaha ka hooseeya wuxuu u isticmaalaa aaladda qufulka qalabka khaanadaha khaanadaha. Lahaanshaha mashiinka TAIWAI ee saxda ah, oo leh fikrad qaabeyn heer sare ah kooxdeena farsamada ee aadka uquruxsan waxay si taxaddar leh u soosaaraan qalab heer sare ah oo heer sare ah oo qalabka GERISS ah kaas oo ah xulashada ugu fiican ee shirkadaha guryaha adduunka.
Qaab No.: EUR33B
Kordhin dheeraad ah oo furan si aad ugu furto hoosta dhalada dhalada leh biinanka la hagaajin karo
Hordhac:Kordhin dheeri ah oo furan si aad ugu furto hoosta dhalada dhalada leh biinanka la isku hagaajin karo badanaa waxay u isticmaalaan jikada & armaajooyinka musqusha. Noocaan ah dhalada khaanadaha hoose waxay isticmaalaan boolal la hagaajin karo iyo fiilooyin balaastig ah oo lagu hagaajiyo khaanadaha alwaaxa. Lahaanshaha mashiinka TAIWAI ee saxda ah, oo leh fikrad qaabeyn heer sare ah kooxdeena farsamada ee aadka uquruxsan waxay si taxaddar leh u soosaaraan qalab heer sare ah oo heer sare ah oo qalabka GERISS ah kaas oo ah xulashada ugu fiican ee shirkadaha guryaha adduunka.
Qaab No.: EUR33C
Kordhin Dheeraad ah oo Xannibaadda Jilicsan ee Xidhitaanka Xadhigga Dambiisha
Hordhac:Kordhinta Buuxda ee Fududeynta Xidhitaanka Jilicsan ee Xidhmada-Dambiilku badiyaa waxa loo isticmaalaa armaajooyinka jikada & musqusha Nooca silsiladdan dambiisha siligga ah ayaa loo isticmaalaa boolal lagu hagaajiyo khaanadda dambiisha. Lahaanshaha mashiinka TAIWAI ee saxda ah, oo leh fikrad qaabeyn heer sare ah kooxdeena farsamada ee aadka uquruxsan waxay si taxaddar leh u soosaaraan qalab casri ah oo heer sare ah oo qalabka GERISS ah kaas oo ah xulashada ugu fiican ee shirkadaha guryaha adduunka.
Qaab No.: EUR33S